Indlela ukuba neengcambu ngokulula Samsung Galaxy S2 | I-Androidsis
UFrancisco Ruiz | | Ingcambu Android, Samsung, Tutorials
Kwisifundo esilandelayo sokusebenzaNdiza kubafundisa ingcambu Samsung Galaxy S2, okanye kwaziwa njenge GT. 9100.
Kumanyathelo ambalwa alula kwaye ixhaswe yimifanekisoSiza kuyenza ngemizuzu nje embalwa, ke masisebenze kwaye siqale.
2 Ukufaka i-XXLPJ ye-Android 4.03 firmware yoqobo
3 Umsuka usebenzisa i-ClockWorkmod Recovery XXLPJ
Ngokucacileyo siya kufuna i-Samsung Galaxy S2, ukongeza kufuneka sibe nabaqhubi abafakelwe ngokuchanekileyo kwi-PC yethu kunye Inkqubo yokusebenza yeWindows.
Ukuba sinayo Isamsung i-Kies ifakiwe, kwaye ngaba sakha sahambelana nesiphelo sendlela, Siza kuba nabaqhubi abafunekayo bokuqhuba umsebenziUkuba akunjalo, uya kuzikhuphela kwikhonkco endikushiyele lona, ​​uzifake kwaye uqalise ikhompyuter yakho ngaphambi kokuqhubeka nesifundo.
Kuya kufuneka sikhuphele iifayile ezimbalwa ukuze siphumelele ngempumelelo Samsung Galaxy S2, yokuqala yazo zonke iipilisi equka i-odin 1.83 kunye neCFRoot XXLPJ, eyesibini yi-firmware 4.03 XXLPJ uqobo lwayo, ke ukongeza ekuphuculeni izixhobo zethu siza kuzihlaziya kuhlobo lwe-4.03 lwe-Android.
Ukuba kukho enye yeefayile ezimbini ekucela ukuba uvule ipassword, kunjalo zamfirmware.com
Nje ukuba iifayile ezixineneyo zikhutshelwe, siya kuyivula kwi-desktop yethu kwaye siya kukulungela qala ukukhanyisa ukuphela kwethu.
Ukufaka i-XXLPJ ye-Android 4.03 firmware yoqobo
Siza kungena kwifolda Iflashprogram Samsung I9100 + Pit Kwaye siya kubaleka njengabalawuli odin.exe:
Ngoku siza kucofa kwibhokisi yePit kwaye siya kukhetha ifayile umngxuma okungaphakathi kwifolda ye ivumba: Iflashprogram Samsung I9100 + Pit.
Emva koko, siza kubeka iifayile kwifolda ye-firmware ngale ndlela ilandelayo:
Cofa apha PDA kwaye sibeka ifayile I9100_CODE_I9100XXLPJ_CL140368_REV02_user_low_ship.tar.
Cofa apha PHONE kwaye sibeka ifayile Imodem_I9100XXLPJ_REV_02_CL1105553.tar.
Cofa apha CSC kwaye sibeka ifayile I-GT-I9100-MULTI-CSC-OXALPJ.tar.
Ngoku, siza kuyicima ifayile ye- Samsung Galaxy S2 kwaye sizakuyilayita Imowudi yokukhuphela, oku kufezekiswa ngokubamba iqhosha ivolumu phantsi, kunye ne iqhosha eliphakathi okanye lasekhaya kunye iqhosha lamandla icinezelwe ngaxeshanye, de sifumane isikrini esilumkisayo esingacinezela kuso ivolumu phezulu.
Nje ukuba uqale ngaphakathi imowudi yokukhuphela, siya kudibanisa nge-usb ifowuni kwikhompyuter, kwaye siyabona ukuba kwibhokisi ephezulu yasekhohlo silifumana njani igama COM ilandelwa linani, oku kuthetha ukuba le nkqubo ichonge ngokuchanekileyo isixhobo sethu, kufuneka sinike ingqalelo yokuba yonke into ekwisikrini se-odin ikwiskrini endisincamathisela apha ngezantsi.
Qaphela kwibhokisi engasekhohlo ukuba iibhokisi ezintathu zokuqala ziphawulwe, Ukwahlula kwakhona, ukuqala ngokutsha ngokuzenzekelayo kunye nexesha lokusetha kwakhona kufuneka likhethwe.
Ngoku siyakuba nayo kuphela Cofa kwiqhosha lokuqala kwaye ulinde le nxalenye yokuqala ukugqiba.
Sivumela ukuba ifowuni iqale kwakhona kwaye siza kuyifaka Ukubuyiselwa kweClockWorkmod ngubani ozophatha Iingcambu zethu.
Umsuka usebenzisa i-ClockWorkmod Recovery XXLPJ
Siza kuphinda siyivule ivumba, kwaye ngeli xesha siza kukhetha ibhokisi ye-PDA kuphela, kwaye kuyo siza kubeka ifayile ICF-Root-SGS2_XX_OXA_LPJ-v5.3-CWM5.tar
Kuya kufuneka siqwalasele ukuba ibhokisi Ukwahlula kwakhona akukhethiweyo, ziibhokisi kuphela ekufuneka zihlolwe Ukuqalisa ngokuzenzekelayo kunye nexesha lokusetha kwakhona.
Siza kujonga loo nto konke oku njengakwisikrini kunye Siza kuvula i-Galaxy S2 kwakhona kwimowudi yokukhuphela, emva koko siya kuyidibanisa kwakhona nge-usb kwikhompyuter, kwaye nje ukuba i-odin iyamkele siza kucofa Qala.
Xa kugqityiwe, siya kuba neyethu I-Samsung Galaxy S2 igxile kwaye yahlaziywa kwi-Android 4.03Siza kuba nokufumana kwakhona okulungisiweyo esinokufaka iiRom eziphekiweyo.
Iinkcukacha ezithe xaxe - Usetyenziso olusemthethweni lwe-Androidsis kwiVenkile yokudlala
Khuphela - Iflashprogram ye-Samsung + cfroot-XXLPJ-j I9100 + Pit, I9100XXLPJ_I9100XXLPJ.zip
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Samsung » Indlela ukuba unyothule Samsung Galaxy S2
Izimvo ezi-112, shiya ezakho
Sebenzisa i-Odin v1.85 amathuba okuba ihambe gwenxa iphezulu. Sebenzisa i-Odin v1.7
Indlela esebenzisa iSuperOneClick ayimfuneko kwaye ndicinga ukuba iphelelwe lixesha ngokufudukela kwi-ICS. Ngoku ukungazithembi okufanayo okanye uSiyah kernel wenza into eyenziwe yiSuperOneClick
· I-kernel ukuba ikhanyiswe kunye no-Odin kufuneka ihambelane nohlobo lwe-Android (iGingerbread okanye i-ICS), ngaphandle kokuba ingekaSiyah, kwaye enye eposini ndicinga ukuba ayikho.
Enkosi ngesaziso sakho se-compi, ndiyivuselele kwaye ngoku ikhuselekile.
Eh ... yeyiphi le mobile? I-Galaxy S2 yenye ENYE
Le yeyona T-Mobile njengoko ubona kwifoto, kodwa isifundo sisebenza kuyo yonke i-Galaxy S2
ilungile ukuba ingasetyenziselwa i-galaxy s2 eColombia ??? ngekhe ubenengxaki zomqondiso okanye into enjalo ???
Phendula ku Dj_nba04
Ndidibanisa umbuzo. Ndivela eColombia ndinayo s2 yasimahla evela kumzi-mveliso kodwa andazi ukuba ivela phi, andazi nokuba ivela e-USA okanye yeyiphi indawo emhlabeni. Ndifundile ukuba i-firmware kufuneka ibhekise ngqo kwisixhobo ngokuxhomekeke kwisalathiso nakwimvelaphi, kwaye ndiyayibona le tutorial ngokubanzi. Ndingathanda ukukucacisa oku ngaphambi kokungena kwisifundo.
i-firmware kufuneka ibe yeyommandla wakho, le ndiyibeka apha yeyaseYurophu.
Le nkqubo ichaze iiterminal zaseYurophu kuba i-firmware yeyona generic yakutshanje yeYurophu.
Ndine-sgs2 evela eRomania kwaye ndiyisebenzisa eColombia ... kwaye ndizamile iiROM ezininzi, ezivela eMzantsi Melika, eMntla Melika naseYurophu kwaye akukho nto yenzekayo, zonke ziyasebenza. Into kuphela kukuba abanye basebenze ngcono kunabanye njengophawu ... i-twitter @harobytes
Enkosi ngesichazi sakho, kusasa kuya kufuneka utshintshe imodem yendawo ethile.
Ndine S2 efowunini yobuqu… andazi nokuba yiArgentina okanye yiChile, hehe, kodwa ndinaso esi sixhobo ndisisebenzisa eBolivia. Ngaba ingasebenza kakuhle?
akukho nto kufuneka yenzekile
Molo, enkosi ngegalelo, kodwa ndinombuzo.
Andiyiboni ifayile CF-Root-SGS2_XX_OXA_LPJ-v5.3-CWM5.tar, inye kuphela enegama "zImage", endinokuyenza. Enkosi
Ifayile yeZimage yile ingena ngaphakathi kwifayile yetar, ukuba awuyivuleli uziphu, uyibeka ngqo kwi-odin
Uxolo ngokungalungisi, kodwa ndiyenza njani iziphu okanye ndiyibeke Odin?
Cofa kwiqhosha le-PDA le-Odin kwaye ujonge ifayile ye .tea ehambelana ne-cfroot
hey, uxolo ngenkxamleko, kodwa; Ndingayivula kanjani kwi-zip okanye ndiyibeke ngqo kwi-odin?
omnye umbuzo ngoku andinakukwazi ukunxibelelana nge-wi-fi
Ndikwazile ukuyisiphula i-galaxy kwakhona, kodwa ngoku andinakukwazi ukufaka nayiphi na i-app, kufuneka ndenze ntoni?
Kwenzeka ntoni kanye kanye kuwe?
Phambi kokuqala ingcambu, kwinyathelo apho siqinisekisa ukuba yonke into ikwiskrini, nje ukuba ndicinezele ukuqala, ibhokisi enkulu yokuqala kuluhlu lwezikwere ezimhlophe zijika zibe bomvu kwaye zithi FAIL. ngoku kwifowuni yam ekuphela kwento ebonakalayo yile: uphawu lwefowuni ephathekayo ... uphawu lwesilumkiso esimthubi (!) ... umfanekiso omncinci wekhompyuter, kwaye andinakuwuqala kwakhona okanye ndenze nantoni na ...
Inkqubo ye_ sitsho
UMiguel ukunike nayiphi na impendulo? Undinceda ??? ukuba uphendule ... a_prog@hotmail.com
UCarlos Garcia Gomez umfanekiso obambe indawo sitsho
Molo NGABA UNAYIPHENDULE? OKWENZEKILEYO KWIMAYINI….
Phendula uCarlos Garcia Gomez
Kwenzeka into efanayo kum, kwaye andazi ukuba ndenzeni
Molo mhlobo, kwa into enye oyithethileyo yenzekile kum kwaye bendisoyika kakhulu kuba bendicinga ukuba ndonakalise iseli yam okanye enye into, kodwa ndicinge ngayo kancinci kwaye endaweni yokusebenzisa odin v 3 ndisebenzise endala .. Ndikucebisa ukuba uzame nge-1.83 okanye i-1.85
Wenze ntoni xa icinyiwe enophawu olutyheli? Yintoni oyenzileyo ukuze uphinde ukwazi ukuyivula, ndiyaluxabisa uncedo lwakho, ifowuni yam ayivuli
Ukuba ungandicacisa nge-imeyile yam ndingaluvuyela uncedo lwakho enkosi yile imeyile yam barbiegarcia4@gmail.com
molo, imibuliso emihle.
Ndine-sgs2 yam, ine-ics 4.0.3 kunye ne-uhplm kernel, ndifuna ukuyisusa, kodwa kuba andazi, ndiyayithandabuza kakhulu. Ndineenkozo ezininzi endizikhuphelileyo (kumanqaku endiwafundileyo) kubandakanya: XEN_LP7-v5.4 cwm5, XEO_LPQ-PROPER-v5.4 cwm5 kunye neSiyah-v3.3.2…. Ndifuna nje ukuba neengcambu kunye ne-superuser ukuze ndisebenzise ngcono ikhompyuter ... kufuneka ndenze ntoni.
I-hug evela eColombia.
Hol, ndenze umqeqeshi, yonke into yahamba kakuhle, i-cel yi-10! Ndinengxaki nje encinci, eminye imidlalo (kuphela imidlalo) ayifakwanga, ngokokuba yintoni le le x apho k yingxaki kernel? yintoni enokwenziwa? okanye ngaba akukho sisombululo se-4.0.3?
NguYesu Herrero sitsho
Okokuqala, enkosi ngenqaku. Ndilandele yonke into kwileta, kwaye ngexesha lenkqubo kunye ne-Odin, ihlala kwi-boot.bin ... Sele ikhona ngaphezulu kwemizuzu eli-15 ... Ngaba kuyinto eqhelekileyo?
Nantsi into andibonisa yona uOdin:
Phendula Jesús Herrero
Ewe, ayiqhelekanga, hayi.
Ndingenza ntoni? Ndiyisuse kwaye iza kuba njengangaphambili okanye ingaba ikhona into eza kwenzeka kuyo?
Ndihleli for aki
Kuqhubeka njani, sele uyisombulule kakade?
Hayi .. kulungile kwinxalenye e-1 ihlaziyiwe yenguqulo entsha kodwa khange ibekiwe, ndingaphinda ndiyenze kwakhona okanye iya kuphazamiseka ifowuni?
Ndiyabulela kakhulu ukusebenza ngokugqibeleleyo ...
UCésar Alanís sitsho
Pffff ungumhlobo omkhulu !!!!! Enkosi kakhulu ngeposti yakho ebalaseleyo! Indincede kakhulu, sele ndinayo i-Samsung Galaxy SII yam ene-Ice Cream Sandwich 4.0.3 kwaye ineengcambu! Mka yeah! hahaha 'Yiva ngathi uyiHacker' hahaha ndiphantse ndaziva ngoluhlobo!
Phendula uCésar Alanís
Ndonwabe kakhulu ukuyiva.
Nge-14/09/2012 ngo-21: 13, «Disqus» wabhala:
Mholo. Ndingathanda ukuyisusa i-galaxi s2 kwaye andinalwazi. Ukuba ungandinceda ndingakuxabisa. Imeyile yam yile; estefi60@gmail.com Enkosi kakhulu
Landela amanyathelo kwisifundo kwaye uya kuyisiphula ngokukhawuleza.
Uphawu lwesilumkiso esimthubi (!)… Kwiselfowuni qala kwiscreen, kwaye andinakuyiqala kwakhona okanye ndenze nantoni na… Kwenzeka ntoni ??? Ndingenza ntoni ??? a_prog@hotmail.com. Enkosi
Kutheni isihogo ungasixeleli ukuba sikhuphe i-sd? Ndiyifomatha kwaye ngoku ayindivumeli ndidlulise nantoni na kwi-sd -.-
Ndiyabulela kakhulu. Isifundo esihle kakhulu. Ngoku umnyele wam usebenza ngcono kakhulu, kwaye unophawu oluninzi nawo !!
Ndonwabe kakhulu, yima ngebhlog amaxesha ngamaxesha ndiza kupapasha iirom ezihambelana nesixhobo sakho.
Malunga nomhlobo wam
Nge-20/09/2012 ngo-16: 07, «Disqus» wabhala:
Molweni .. Ndiyenzile njengoko isitsho itutu kwaye i-samsung s2 yam ayiqali ndiyilayite kwaye ndifumana isansung screen kwaye ndehlise unxantathu omthubi kwaye icime… .help… ..
Mholo. Ngaba ukwazile ukusombulula ingxaki? Kwenzeka into efanayo nakum. Ivula, isikrini se-Samsung esinonxantathu omthubi, kwaye sicime. Akukho tyala.
Ubuncinci beDelaRosa sitsho
Isikhokelo esihle kakhulu, saphuma sigqibelele….
Molweni nonke, ndiyenzile ingcambu, emva koko ndiza kunixelela ukuba ndiqhuba njani. Ukubulisa
ICS 4.03 ifakwe ngokugqibeleleyo. Enkosi kakhulu ngengeniso yakho. Konke okugqibelele.
Molo, umbuzo omnye nje:
Kutshanje ndithenge i-Samsung Galaxy S2 kwaye iselfowuni ithi inenguqulo ye-4.03, ke ukuyisusa kufuneka ndiqale ngokufaka i-XXLPJ Android 4.03 firmware oyibekileyo okanye ndiyisiphule ngqo kwi-ClockWorkmod Recovery XXLPJ?
Ngohlobo onalo, esi sifundo asifanele, okokuqala kuya kufuneka uyikhuphele kwiGinger, okanye ufumane into nge-ICS
Ngokukhuphela kwiJinja, ngaba uthetha ukukhuphela i-firmware yeselfowuni kwisezantsi? Kwaye ndenza njani? Ndingumfana omtsha kwaye andazi ukuba ihamba njani le nto.
Ngaba umntu unokundixelela ukuba ndingayiphula njani i-Samsung Galaxy S2 ukuba ndine-firmware 4.03, nokuba ibonisa amanyathelo okanye kufundiswa?
UmKristu Pena sitsho
Imibuzo embalwa ngaphambi kokwenza yonke into eyimfuneko, emva kokwenza icandelo le-1 le-Odin kwaye ihlaziywa kwi-ICS kwaye emva kokuba iqale kwaye kwi-cel ndifaka iClockWorkmod Recovery (RomManager) kwaye ndiyidibanise? Eli candelo kuphela kwento engakhange icace kum, ndingayivuyela impendulo yakho. Igalelo elihle kakhulu. 🙂
Phendula umKristu Peña
Kwinxalenye yokuqala sifaka i-firmware 4.03 kwaye kweyesibini siyisiphule kwaye sifake iwotshiMod Recovery
Ukugqwesa Enkosi ngempendulo ekhawulezileyo, namhlanje ndenza inkqubo. Ndiyabulisa!
UJuan Pablo Cuenca sitsho
Molo, umbuzo, ndihlaziya iseli kunye nee-kies ziye ku-4.03, ngaba esi sifundo siyandinceda ukuba ndibengcambu?
Phendula u-juan pablo cuenca
Ukuba unayo i-XXLPJ firmware
Ewe kufanelekile, kodwa kuya kufuneka wenze kuphela icandelo lesibini lesifundo.
UFrancisco: Ndinokuthandabuza okukhulu: Sele ndinayo i-ICS 4.0.3, kodwa iKernel yam ithi 3.0.15-i9100UHLPJ-CL352354. Andazi ukuba xa ubeka i-XXLPJ XX ngu "generic 2 characters" okanye yi-XX ngenene, kufanelekile ukutshintsha i-firmware ukuba yeyokugqibela? Enkosi
Awunyanzelekanga ukuba ujonge apho ithi iKernel ukuba akukho apho ithi Firmware okanye inombolo ye-Buid
Enkosi uFrancisco ngempendulo yakho ekhawulezileyo. Ndenze yonke into ngokufanayo kwaye ukuza kuthi ga ngoku yonke into ilungile. Igalelo elihle kakhulu.
IPía Constanza Acuña Espinoza sitsho
Molo, i-S2 yam sele ine-IceCream 4.0.3 kodwa i-kernel yi-XXLPQ endaweni yento oyithethayo i-XXLPJ yakho, ngaba kufuneka ndiyitshintshe okanye ndingatsiba ndiye kwinqanaba lokugqibela ndiyincothule ngqo?
Phendula Pía Constanza Acuña Espinoza
I-cfroot kufuneka ifane neKernel oyifakileyo. Nge-09/10/2012 00:10, «Disqus» wabhala:
Hee mhlobo, le ndlela inzima kwaye iyingozi.
Le ndlela yeyona ilula kwaye ngaphandle kokutshintsha ikernel, kodwa isebenza kuphela nge-ICS 4.0.3 kunye ne-4.0.4.
1. Khuphela i-ClockWorkMod Recovery [Chukumisa v5.8.1.5] okanye uguqulelo oluqhelekileyo [v4.0.1.5]
2. Khuphela iSuperSU v0.88 + iBusybox / SuperSU v0.87 + iBusybox
3. Khuphela zombini iifayile ze-zip kwi-SDCARD YANGAPHANDLE
4. Qala kwimowudi yokubuyisela kwimeko yesiqhelo
5. Khetha sebenzisa uhlaziyo kugcino lwangaphandle
* Ukuba "ukusilela ukunyuka" kuyavela, asinayo i-sd yangaphandle efakiweyo
6. Khetha i-ClockWorkMod Recovery .zip esiyikhupheleyo kwinyathelo loku-1 kwaye silinde ukuba i-CWM ifakwe kwaye ivele.
7. Khetha ukufaka i-zip kwi-sdcard, khetha i-sdcard yangaphakathi okanye yangaphandle
8. Fumana kwaye ukhethe i-CWM SuperSU v0.87 + ne-Busybox [I9100] .zip
9. Qala kwakhona i-terminal
Akukho bungozi balo naluphi na uhlobo.
ErIka Io sitsho
Molweni ndicela uncedo bendizama ukwenza njengoko kuchaziwe ekuqaleni kwephepha ukufomata iselfowuni yam yokukhuphela zonke iifayile njengoko isitsho kodwa iselfowuni yam ayifumani myalezo okanye nantoni na ibiza nje ukuba ayivuleki kwaye ayenzi nto ngaphandle kokuhlawulisa nceda yintoni endinokuyenza? Ayisebenzi inyanga kwaye ndiqinisekile ukuba kungenxa yentsholongwane, ekuphela kwento endiyibonayo kukuba iyalayisha kodwa icinyiwe ngoku andazi ukuba sikhona na isisombululo sale nto, ndicela undixabise kakhulu Uncedo lwakho!
Phendula u-ErIka Io
Kodwa ngale ndlela kuphela iwotshi yewotshi efakiweyo? okanye iphinde yazinza?
Ndabona ukuba kwiforum kwaye andinakukungqina oko kuba andifumananga i-S2, oko kukuthi ukuyisiphula ngaphandle kokutshintsha i-kernel ngokulula kwaye ngaphandle kweengxaki, ndikushiya ikhonkco.
Molo, ndihlaziye i-galaxy S2 namhlanje ukuya kwi-Android 4.0.4 esuka kwi-Samsung Kies. Ngaba ndingazingcambu ngaphandle kwengxaki ngenxalenye yesibini yeposi?
Molo NDIYE NDIHLALA NDISELE I-MOBILE YAM ENGAGUQUBI, IYAHLALA INESILUMKISO ESILAWULISA NGOKUPHELELEYO ... NDENZE NTONI NDICELA !!!!!!!!!!!
Molo, ndinengxaki nesamsung sll yam, andinakho ukufaka nayiphi na ifoto kwibhlog yam yokupheka kwaye ukuba ndiyigqithisela kwi-pc x blutu yam andikwazi ukuyivula nayo, ingxaki yi-x ifomathi ekuyo imifanekiso, kodwa andinalo nofifi lokuba ndingayitshintsha njani ifomathi.Ndinengxaki xa ndiqhagamshela imov kwikhompyuter x usb, xq ndifumana iifolda kodwa andikwazi nokuzivula.Ndifuna x nceda Nceda! Enkosi !!
Molo, ungakhathazeki, isisombululo sengxaki yakho siya kufumaneka kule URL, yenzeke kum ngokufanayo:
ayikudlulisi oku: Yongezwe !!
Ndicebisa ukuba ndenze ntoni? kuba ibinje ngaphezulu kwemizuzu engama-20 kwaye ayisiyi phambili umba kukuba ungasusi imemori khadi eya kulibazisa. Ngaba ndingayinqamula ngaphandle kwento eyenzekayo kwifowuni?
Molo, yenzekile kum, ukusilela kubonakala kubomvu kwaye ifowuni ayiqali
Ngqoko. 07 sitsho
Ndineengxaki kumfanekiso wekhamera kwaye andiziboni iividiyo
Ndiyenza yonke loo nto kwaye iyandiphosa
Inxalenye apho kuya kufuneka ubeke ifowuni kwimowudi yokulungisa ilahlekile, yiyo loo nto inokungaphumeleli okanye ufumane unxantathu odumileyo, uyilayite kwakhona, ususe ibhetri kwaye uyiqale kwakhona kwimowudi yokwehlisa, edla ngokusombulula ingxaki kunye elandelayo, ngokuqinisekileyo uyakhumbula ukuyibeka kulungiso lweengxaki.
Andres11 13 sitsho
Emva kokuyizinzisa, ndiye ndaqala ukuba neengxaki zokufaka ezinye usetyenziso kwivenkile yokudlala kaGoogle. Sele ndikhangele amaphepha aliqela kodwa xa ndizama ukulandela izifundo zabo ukusombulula ingxaki i-odin ithi Fail. Nceda uncede. NdineGT-I9100
Phendula Andres11 13
molweni ekuseni, le nkqubo inye yeengcambu isebenza kumnyele we-s2 gt-i9100P
ukulandela enye isifundo nditshixe ifowuni yam, iyabambeka kwiscreen sasekhaya kunye nelogo kunye nonxantathu wesilumkiso kwaye ukusuka apho akwenzeki.
Ndenza ntoni ukuze ndimvuse?
ngale ngcambu andinakukwazi ukufaka usetyenziso kwi-SD, omnye umntu angayenza?
Molo ndisandula ukuhambisa isamsung galaxy s2 kwaye ayikhanyisi, ndinike iqhosha lamandla ndashiya ilogo yesamsung kunye nonxantathu omthubi ... NCEDA UKUBA UNGANDINCEDA ... UKUYIBUYISA
Qhawula irockwell sitsho
Ndilandele onke amanyathelo kwaye ndigqibelele! I-5 kwi-5 yonke le nkqubo ithathe iyure enye.
Phendula uRip Rockwell
Molo, ingaba eli gumbi lilungele nayiphi na indawo yehlabathi okanye iYurophu kuphela?
Ndiyenzile ngokwemiyalelo yakho kwaye ayiqali, ilayisha isikrini sokuqala kwaye emva kwesibini icime ...
UJonathan Ramos sitsho
Phendula kuJonathan Ramos
UJUAN GUILLEN sitsho
ENKOSI NGENKCAZELO, NDIYENZE KWINYAWO YONCWADI YAYESEBENZA NGOKUMANGALISAYO, MASIBONE UKUBA KUKHO UKUZIPHATHA KANJANI KULAPHA.
Phendula JUAN GUILLEN
kpo ndivela eArgentina bendifuna ukuyihambisa nge-odin kwaye yahamba gwenxa kwaye ekuphela kwendlela engena ngayo kukuthotywa ukuba ndilandela la manyathelo aya kuba yinto yesiqhelo kwaye ndiza kuba nomsebenzisi omkhulu
Kakhulu!!!! Isixhobo sam besifile sisifundo esibi kwaye enkosi kuwe ndiyivuselele kwaye ndakwazi ukuyisusa.Andazi ukuba ndingakubulela njani kodwa undigcinele isigidi sombulelo wengqondo !!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!
Molo, undincede kakhulu. Umthala wam 2 ubufile kwaye ndiyifumene ngokulandela imiyalelo kwisifundo sakho. Enkosi kakhulu mfondini
Ungandinceda? Ndifuna ukutshintsha imei ye-galaxy 2
UAna Karina Schmieloz sitsho
Molo, inkcazo yakho intle kakhulu, ngoku ndikubuza umbuzo, ndinenguqulo 2 kwi-Samsung Galaxis S4.0.4 yam, ingaba intle loo nto? kwaye ndihlomla ukuba i-icon ye-samsung apps premium application andinayo.
Ndicela undixelele ukuba kulungile.
Phendula Ana karina Schmieloz
Ingcambu emnandi, kwisiqingatha seyure kwaye kunjalo, ngomnqweno wam, kuthathe ixesha elide, ndiyenzile ngenguquko.
UMari diaz rodriguez sitsho
Ngaba ukwazile ukusombulula ingxaki? Kwenzeka into efanayo kum kwaye ndiphelelwe lithemba
Phendula uMari Diaz Rodriguez
Molo, sele ndinayo i-4.0.4 efakiweyo, ndingayingcambu?
Isebenze ngokugqibeleleyo kum. Kulula kunokuba kubonakala kunjalo. Enkosi ngoncedo! Ndiyithandile loo nto xa ihlaziywa, xa uyivula inokubonakala kobuso !! yena yena
UMarcelo Mariano Parisi sitsho
Ndenze yonke into ngoku kuvela unxantathu omthubi kwaye iselfowuni ayivuli
Phendula uMarcelo Mariano Parisi
Molo ndine fireware efakwe kwi-ics 4.0.3 i-xxlpg le fireware osinike yona xa siyikhuphela ibhetele endingenayo ayithethi monakalo ukuba ndiyayidibanisa x xxlpj
Mholo. I-sgs2 yam yeza ne-Android 4.0.3 le ndlela isebenza ngokufanayo kwingcambu yeseli yam? kwaye ngaba ikhona indlela yokuyihlaziya ibe ngu-4.1 okanye u-4.2? phendula imeyile nceda. Ndiyabulela kwangoko
UAlicia Moya Fernandez sitsho
Uphantse wakhala !!!! enkosi ngetuto !!!! ilunge kakhulu!!! Xa ndabona i-SG yam andizange ndikholelwe !!!!
Phendula uAlicia Moya Fernández
Enkosi mhlobo kodwa akukubi kangako, nangona kunjalo ndiyavuya ukukunceda.
Ndidinga okanye ndincede ndine-SG2 kwaye ndiyinike i-icon yesilumkiso kwaye ayikhanyisi, ndingenza ntoni?
Into elungileyo kukuba ujonge ukuba uyakwazi ukufikelela kwimowudi yokukhuphela kwaye ubhalise kwi-samobile.com kwaye ukhuphele i-firmware eyimfuneko yesiphelo sakho kwaye uyikhanyise nge-odin.
Enkosi ndiza kubona ukuba iyasebenza
kwaye umbuzo xa ndicima iselfowuni yam ayiboni lasim kwaye andikwazi ukwenza iminxeba kwaye ukuba ndizama ukushiya inethiwekhi ephathekayo ayifumaneki naliphi na ingcebiso nceda
Andiwuqondi lo mbuzo, uthetha ukuthini ukuba ndiyayicima? Ukuba icinyiwe, uza kukwazi njani ukufikelela kwinethiwekhi okanye wenze iminxeba
Ndinomnyele we-2 ovela kwiselfowuni kwaye amaqhosha angezantsi awandisebenzeli. nanye
Olu qeqesho alukho kwimodeli yakho ye-S2
javi irhabaxa sitsho
Molo, indibuza ikhowudi yenethiwekhi, ndenza ntoni?
Phendula ijavi basto
molo francisco, ndingayithatha njani into yokuba ingathotyelwa ayicimi ithagethi
molo francisco, ndiyisusa njani le kwi-samsung galaxy s2 downloanding ayicimi ithagethi, enkosi
Molweni, ninjani? Ndiyabulisa, ndine-Samsung Galaxy S2 kwaye ndifuna ukuyisusa kodwa andifumani nto kukhuphelo, kuphela i-odin kunye nale fayile u1_02_20110310_emmc_EXT4.pit kuko konke, nceda ungandithumela I-XXLPJ yoqobo ye-Android 4.03 firmware eneefayile ezi-4 ozikhankanyileyo kunye ne-ClockWorkmod Recovery XXLPJ ukuyisusa, ndingavuya kakhulu, kuba ndifike mva kule post yakho kwaye iifayile ozikhankanyileyo apha azisekho , ukusukela ngoku ndikuthumelela imibuliso enkulu nokuwola, Enkosi
I-s2 yam iswelekile, ndiwalandele onke amanyathelo kwaye akhonto.
RES Kulungile !!
Yonke imisonto igqityiwe. (phumelela 1 / usilele 0)
kwaye akukho qhekeza limthubi ekuqaleni.
Iimephu zikaGoogle kunye noGoogle Earth bahlaziywa